﻿﻿ Puntland State of Somalia – Tartan furan oo loo galay cidda noqonaysa Agaasimaha guud ee Mac-hadka Tababarka shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Puntland
Imtixaanka oo ahaa mid loo qaadayey hannaan Electronic ah si looga fogaado wax walba oo keeni kara mugdi isla markaana hoos u dhigi kara kalsoonida tartamayaasha iyo guud ahaanba dhallinta dalka wax usoo baratay ayaa waxaa uu qayb ka yahay barnaamijka tayaynta shaqaalaha ee uu Baanka adduunku ka caawinayo dawladda Puntland.
Mac-hadkaan ayaa waxaa uu shaqaalaha dawladda ka caawin doonaa tayaynta aqoontooda. sidoo kalena waxaa looga kaaftoomi doona safarradii ay dawladdu shaqaaleheeda debedda ugu diri jirtey tababarrada isla markaana ay dawladda kaga bixi jirtey dhaqaale iyo waqti aad u badan.
Guddoomiye ku xigeenka hay’adda shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Mudane Jaamac Xirsi Faarax oo isagu furay imtixaanka maanta ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu mac-hadkaani u leeyahay shaqaalaha dawladda isagoona xusay in uu mac-hadkaani fududayn doono in qofka shaqaalaha ahi uu gelinna dawladda u shaqeeyo gelinka kalena uu aqoontiisa kor u qaado isagoo ka faa’iideysaya mac-hadkaasi.
Sidoo kale guddoomiye Jaamac Xirsi Faarax waxa uu xusay in ay dawladdu dedaal dheer u gashay isla markaana ay muddo dheer ku hawllanayd sidii loo hirgelin lahaa mac-hadkaasi maadaama uu Madaxweyne Dr. Cabdiwe Maxamed Cali Gaas hore ugu ballan qaaday shacabka iyo dawladdaba in si mug leh kor loogu qaadi doono tayada shaqaalaha dawladda.
Agaasimaha cusub ee la qaadan doono ayaa waxaa looga fadhiyaa dar-dargelinta hawlaha ballaaran ee looga fadhiyo mac-hadkaasi iyo talo bixinta siyaasadaha halbowlaha u noqon doona hannaanka waxbarasho ee Mac-hadka.